Ego ole ka njegharị Tour de France na-efu 2020? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Degbọ njem ọzụzụ de de France - ihe ngwọta dị irè
Degbọ njem ọzụzụ de de France - ihe ngwọta dị irè
Ego ole ka njegharị Tour de France na-efu 2020?
Ọ gaỌnụIhe ruru $ 12,000. NaNjem nke Franceabụghị naanị nnukwuịgba ígwèagbụrụ nke afọ-ọ ​​bụkwa ọkwa kasịnụ maka ndị nkwado na ndị nrụpụta iji kpughee igwe nrọ nrọ kacha ọhụrụ ha. Nov.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Tour de France bụ ihe omume ịgba ígwè kachasị ukwuu nke oge ahụ, nke a na-eme na July. Na njem ndị na-agba ịnyịnya kachasị mma n'ụwa na-asọ mpi 21 nke gafee France maka ọnụahịa kachasị na ịgba ịnyịnya na-acha odo odo ugbu a, ọ bụrụ na ị hụbeghị agbụrụ ịgba ọsọ tupu njem ahụ, ọ nwere ike ịbụ ihe izu atọ izu atọ nke ịgba ọsọ kwa ụbọchị dị iche ndị mmeri na ọtụtụ agba dị iche iche Jerseys siri ike idobe, yabụ anyị ga-agbaji ya na ntuziaka onye mbido a na Tour de Frost Gịnị bụ njem ahụ? The Tour de France bụ otu n'ime atọ nnukwu igwe kwụ otu ebe njegharị na ọ bụ? agbụrụ kachasị asọpụrụ na kalenda enweghị ajụjụ dịka onye mmeri nke njem France na-enwe 21 nkebi nke ọ bụla gbasaa karịa izu atọ ugbu a, usoro ọ bụla agbatịwo, onye ndu agbụrụ ahụ na onye mmeri zuru oke kpebisiri ike na a ga-atụgharị oge a na-agagharị ugbu a. na mgbakwunye na n'ozuzu ogo dị ka mkpokọta ogo ma ọ bụ izugbe nhazi ọkwa na gcas, nke ọ na-adịkarị zoro aka, ịbụ onye mbụ ịgafe agbaru ọ bụla ogbo na-anyanya ogbo-eto eto The tour na-agụnyekarị ụbọchị abụọ izu ike na-enweghị ọduọ, ọ bụ ezie na ndị na-agba ha na-apụ ma na-eme ikpere iji mee ka ụkwụ ha na-agagharị, mana ha na-ewepụ ụbọchị ndị a iji jide n'aka na ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịgbake ka ha wee nwee ike ịgba ịnyịnya ike dịka o kwere mee n'ụbọchị ndị na-abịanụ iji mee ka agbụrụ ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ dị ka o kwere mee ugbu a Njegharị na-aga kemgbe 1903 na naanị nkwụsịtụ site na agha ụwa mbụ na nke abụọ malitere na mba agbata obi dị ka Belgium, Netherlands, Great Britain na ebe ndị ọzọ, ugbu a ọkwa mbụ nke a na-agba ọsọ agbụrụ na mba a, mana ha na-aga France maka mmalite a maara dị ka Grand Departall, na-eme njem nke Tour de France otu n'ime usoro ise dị iche iche na-ada na ọkwa mbụ dị larịị usoro ndị a na-enwekarị obere mmasị ma jiri ya ịkwaga agbụrụ n'etiti ugwu site na mpaghara French, ugbu a ndị ọkachamara anyị na-akpọ ndị na-agba ọsọ na-emeri ha, ndị nwere ọsọ ọsọ karịa 70 kilomita kwa elekere ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ gaa na njedebe na ebe kachasị ọsọ, mgbe ahụ anyị nwere nkebi ugwu ugbu a ugwu nke njem bụ isi ihe omume na akụkụ nke agbụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịbụ akụkụ nke, ndị na-ekiri na racers ndị a nkebi na-agbasa n'etiti French alps na pyrenees na ndị a nkebi dị na izu atọ nke ọtụtụ puku mita ịrị ugwu ị nwere ike ịkwụsị na nnukwu ugwu dị ka ebe nzukọ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe nnukwu mkpọda ugwu mgbe ị rịgoro elu ugwu a na-abụkarị ve ry na-akpali akpali na ha na-Elezie nnukwu ikpebi ihe na izugbe oge ikpe ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji merie njem nke France ị ga-abụ ezigbo oge ikpe Nke ahụ pụtara na-agba ọsọ megide elekere, n'ihi na ọ bụ onye na-agbasi mbọ ike na a oge na nke ọ bụla ọkwọ ụgbọala na obere oge nke nkeji oge na-esote, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ejikarị ịnyịnya ígwè na akụrụngwa pụrụ iche ka ha wee nwee ike ịgba ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee na oge ha nwere ike ịnwale oge ọ bụla, site n'okporo ụzọ dị larịị ruo na ugwu na ọbụna ugwu dị ọcha na-enye ohere dị ukwuu maka ọkwa zuru ezu iji tinye oge dị ukwuu na ndị asọmpi. A na-anwale ule oge otu n'otu usoro ahụ dị ka ọnwụnwa nke oge en mana mana ndị otu ahụ na-eduzi ha ugbu a, otu ọ bụla na-apụ ma na-agbagharị na nhazi usoro iche n'echiche nnụnụ na-akwaga na nnukwu V usoro a na-enyere aka imebi ifufe ma debe ijeụkwụ dị oke ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka ndị ọrụ ruo na njedebe dịka o kwere mee.
Ugbu a ndị otu ahụ na-amalitekọ ọnụ na oge ikpeazụ enyere enyere bụ onye na-agba nke ise gafere agba ọsọ, mana ha na-ebukarị mmadụ asatọ agba. Ya mere, mgbe ha nwere ndị ọkwọ ụgbọala asatọ gbadara atọ nke ahụ bụ ise, yabụ ha na-enwekarị ndị ọkwọ ụgbọala atọ na-eme ihe ha nwere ike. Anyị na-atụgharị Calla gburugburu ma na-ere ọkụ nke ọma, ha ga-aga nke miri emi ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịhapụ nso nso, ka ndị ọzọ fọdụrụnụ gaa n'ihu na-enweghị ha, ndị na-agba ịnyịnya a ga-agagharịkarị na nke ha, mgbe mgbe ka sacrificechụ àjà maka onye ndu otu ha, ugbu a, ikpe nke otu oge na-adị ka igwe nwere mmanụ nwere ezigbo uru karịa ndị ọzọ na-eso ụdị ihe omume a, onye mmeri niile nke Tour de France bụ otu onye na-agba ịnyịnya nwere obere oge. na njedebe nke 21st, nke kwụsịrị na akara ngosi Champs-Elysees na Paris kemgbe 1975, nnukwu ìgwè ndị na-agba ịnyịnya na njem a maara dị ka peloton thepelotonis nwere ìgwè 22 nke ọkwọ ụgbọala asatọ ọ bụla, yana ndị ọkwọ ụgbọala 176 ọ bụla malite.
Otu ọ bụla nwere ndị ịnyịnya kachasị mma nke mejupụtara onye bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè kwa afọ. Otu 22 ndị a gụnyere otu egwuregwu Top Tier World Tour yana otu aka ole na ole nke otu egwuregwu nwere akara abụọ. Ndị otu na-akwado pro-continental na-achọkarị r. inwe ider ma a na-ewere ha dị ka ndị pere mpe, ọ bụ ezie na ndị otu egwuregwu nwere nnukwu ohere ugbu a maka ndị otu a, ndị otu pro-kọntinent, iji chee ndị ha na-akwado ha n'ọsọ kachasị nke oge ahụ, iji merie ndị otu egwuregwu Bigworld na ikekwe maka Na-adọta ndị na-egwu egwuregwu nke ga-elebanye anya na ịbanye ha maka njem ụwa n'oge na-abịanụ, ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ ga-agba ọsọ ahụ na breakaways iji nye ndị na-akwado ha ọtụtụ anya, dị ka o kwere mee, ugbu a ndị otu ga-abụ na-elekwasị anya na otu ndị na-agba ịnyịnya abụọ ma ọ bụ abụọ ndị a họpụtara dị ka ndị isi otu ndị otu ga-achọ iji merie ọkwa nke ọ bụla ma ọ bụ onye ndenye ọkwa zuru oke nke ebumnuche ya bụ imeri Tour de France, yana onye isi ndị ọzọ mejupụtara. domestiques, nke pụtara n'ụzọ nkịtị ka ndị ohu ugbu a ụlọ iji kwado ndị otu egwuregwu ha, ohere idu ndú nke ha iji chụọ àjà ma nyere ndị otu ahụ aka inweta Toredomestiq Ndị mmadụ na-agakarị n'isi nke otu ahụ jiri nwayọọ nwayọọ.
Mwakpo na-ebelata onye ndu site na ifufe, na-echekwa ike onye ndu ahụ n'okporo ụzọ ebe ụgbọ ala ha na-enweghị ike iru ha, na-enye ha igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe nke ha iji weghachite ha n'okporo ụzọ ozugbo enwere ike iweta agbụrụ, mgbe ọkwa ọ bụla nwere naanị otu onye mmeri ma ọ bụ naanị otu onye ọkwọ ụgbọala meriri njegharị a na ngụkọta mmeri ndị a bụ n'ihi ọrụ impeccable nke ndị otu egwuregwu asatọ na-etinye ya, ọ dịghị onye nwere ike imeri njem njegharị de France naanị ọ gaghị ekwe omume ilu ochie a na-arụkọ ọrụ ọnụ. na-eme ka nrọ ahụ bụrụ ihe ịga nke ọma na njem ahụ bụ ihe ngosi mara mma nke dị iche iche nke agba na-agbagharị site na France nke a ngwakọta nke uwe ndị na-eto eto sitere na nkwado nkwado logos na-akpali akpali ụkpụrụ na agba agba bụ n'ezie anya n'etiti ndị otu egwuregwu oge niile ị nwere ike ịchọta ugbu a Understandghọta uwe ha ga - achọta uwe mpempe akwụkwọ dị mkpa kachasị mkpa nke na - ejedebe na njedebe nke onye ọ bụla The Le Mayo Jean jersey jeli bụ ihe kacha mkpa na prestigious iconic jersey nke Tour d e Ndị na-agba ịnyịnya France nwere oge kachasị dị ala karịa oge, oge ahụ bụ odo, ekele maka akwụkwọ akụkọ French Auto, nke kpọsaa agbụrụ ahụ na mbido narị afọ nke 20, e bipụtara ya na akwụkwọ edo edo edoghi anya, ugbu a onye ọ bụla yi uwe a njedebe nke ogbo 21 ga - emeri Tour de France maka ndụ ha niile site na ndị ọgbọ ha na ndị otu ha ma jiri ego nrite nke 500,000 euro onye na - acha ọcha ọcha le Mile Block na - acha ọcha jersey na - egosi onye ọkwọ ụgbọ ala kachasị mma nke agbụrụ a. enịm ọkwọ ụgbọala na ngụkọta standings n'okpuru 25 January mbụ na nwoke agbụrụ afọ 'kwere omume na-odo jersey na-acha ọcha jersey na nke a bụ ugbu a odo jersey ga-prioritize-eto eto na-agba na nke abụọ ebe n'ozuzu ọkwa na-eyi na-acha ọcha Jersey na njedebe nke njem ahụ onye ọkwọ ụgbọ ala kacha mma na-ewe 20,000 euro Akwụkwọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a na-akpọ Lumaio ver bụ onye na-agba ọsọ na-agba ọsọ niile A na-enye ndị na-anya ụgbọ ala mbụ ka ha gafee fin Ish akara ụbọchị ọ bụla a na-enye ihe ndị dịnụ Agbanyeghị, dabere na ọkwa ụbọchị, na mgbakwunye na isi okwu ndị a, ụzọ nke ụbọchị ọ bụla na-agba agba nke a na-akpọ agba ọsọ nke na-abịa tupu akara agwụ, yabụ agbụrụ ndị ahụ ka na-atọ ụtọ. A na-enye ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ ọsọ maka agba bọọlụ yana nke na-agba ọsọ na onye na-anya ihe kachasị Points na njedebe nke ọsọ ahụ na-eyi akwa na-acha akwụkwọ ndụ ugbu a, onye na-agba ọsọ na-anakọta akara a ma ọ bụ eyi ya mgbe ọ nwere mmeri nkebi ma na - abia mgbe nile n’elu 15, na nkebi ọ naghị emeri ma na - alụ ọgụ n’elu ugwu dị elu Maka ndị na - apụ apụ ị nwere ike ijide agba agba dị na etiti ọbụlagodi mgbe ị na - emeghị ọnụahịa nke onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ puku iri abụọ na puku ise , dotted jersey la moi poirous in the same way to the friends of the intermediate phase at the top of each isi nrigo ebe nke mbụ ndị na-agba ịnyịnya iru n'elu, ọnụ ọgụgụ nke isi ihe dịgasị dịgasị dabere na nhazi ọkwa nke rịgoro, nke siri ike mgbago ugwu, a na-enyekwu isi ihe Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ọtụtụ ugwu ugwu na-eyi uwe na-acha uhie uhie ma were 25,000 n'ụlọ ya na njedebe nke njem ahụ. Ndị na-ede akwụkwọ na-achọkarị imeri ọkwa dị larịị na-echebe onwe ha pụọ ​​na ifufe n'azụ ndị otu ha ụbọchị niile na-anwa ịnọ n'akụkụ elu nke ubi ahụ iji zere nsogbu, zere mgbawa nke ngalaba teknụzụ kpatara, mgbanwe mgbanwe, ikuku na-akụ ụdị ihe niile. , ma mgbe ha na-akwa ụta ọ dịghị mgbe ha na-emetụ ifufe aka ma ha na-ezobe mgbe niile n'ihu peloton maka otu narị mita gara aga ebe ha na-apụ n'azụ ndị otu ha bụ ndị nyere ha nnukwu isi ịmalite imebi mmeri Sprinters mepụtara ọtụtụ nke ike ọbụlagodi obere oge na ị dị oke ọsịsọ spbụ onye na-agba ọsọ bụ ọrụ pụrụiche ma dị egwu Ọkwọ ụgbọ ala ndị meriri ịgba ọsọ nwere nsogbu ịgafe n'ugwu dị elu ou na-anaghị egekarị ntị site na onye na-agba ọsọ nọ n'otu bes N'ikpeazụ nke ndị na-agbagharị agbagharị na-abụkarị awa n'azụ ndị mmeri n'ozuzu ha, ha nwere ike merie ọtụtụ usoro na njem ndị njem. alists Ndị a na-agba ịnyịnya na-arụ ọrụ na ịrịgo na ha na-eme ndị na-agba ọsọ ọsọ na-abụkarị ndị na-agba ịnyịnya bụ ndị na-achọ iji nweta mmeri ahụ n'ozuzu ha ka ha merie, mana enwekwara ndị na-arị elu n'ọsọ ahụ ndị na-enweghị mmasị na uwe ojii. iji merie ndị mbata na ugwu.
Ugbu a, onye na-agba ịnyịnya chọrọ mmeri njem ahụ dum ga-arịgo ugwu nke ọma ma nwee ike ịmepụta oke oghere na njikọ ahụ wee mee ka ndị asọmpi tufuo oge dị ukwuu na nhazi zuru oke n'otu n'otu. oge ikpe dị ezigbo mkpa na agbụrụ agba ga-enwe ma ọ dịkarịa ala otu mbipụta nke njem nlegharị anya, mana ụfọdụ agbakwunyela mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ karịa ndị isi otu ndị ga - emeri nghazi nke njem ị kwesịrị ịdị enwe ike ịmepụta oge dị mma oge ikpe ikpe oge na-adịkarị n'etiti minit 30 ruo elekere ma ndị na-agba ịnyịnya nwere ikike iji merie ndị asọmpi ha site na nkeji ma ọ bụrụ na ha dị ezigbo mma na ya na-emeri mkpokọta nhazi ọkwa na oge nnwale nnwale ga-enwe nnukwu uru karịa onye na-agba ọsọ agc bụ onye na-adabere na ịrị ngwa ngwa na ugwu iji nweta oge ugbu a na mgbakwunye na oge ịnwale oge na-enye onyinye oge ọ bụla maka ndị agba atọ mbụ gafere agba ọsọ na-ewere isii na sekọnd anọ maka nke mbụ, nke abụọ na nke atọ ebe ladiesla tour de franceam ọzọ na-abịa pelotone ụmụ nwanyị njem ogologo izu atọ na-ewere ọnọdụ na girorosa, agba ọsọ ụbọchị 10 nke na-amalitekarị na july yana a na-ewerekwa ya, ụlọ ọrụ ahụ nke ahụ na-ahazi njem nlegharị anya na-ahazi usoro ịgba ọsọ otu nwanyị nke otu ụbọchị nke emere n'otu ụzọ ahụ dị ka ọkwa nke agbụrụ ndị nwoke ruo ọtụtụ afọ. Nke a bụ ụzọ dị larịị gburugburu champs-elyseesin paris nke ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-echekarị na anyị niile kwenyere na ezigbo ụmụ nwanyị-la tour de france ga-agbanwe ihu ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya igwe ruo mgbe ebighi ebi ma bụrụkwa nnukwu ụzọ iji Egwuregwu ziri ezi n'eziokwu na n'onwe m amaara m na ọ ga-abụ ihe dị ịtụnanya iji nwee ike ịhụ nke a wee bie ndụ dị mma enwere m ihie ụzọ nke kedu ka m si hụ nke a - ebe kachasị amasị anyị ileta ndị njem nleta n'ezie agbụrụ gcn gafere mana enwere ike anyị nwere ntakịrị mmasị mana ma e wezụga njem ahụ anyị nwere ọtụtụ agbụrụ ndị ọzọ dị ukwuu kwa afọ mana gcn dị ọhụụ? Race Pass nwere ihe niile ịchọrọ, ọ nwere ụdị atụmatụ dị iche iche dị ka profaịlụ ọkwa, ndepụta mmalite, ihe ngosi kwa ụbọchị mgbe nyocha agbụrụ na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ, ọ nwere ezigbo ihe niile ịchọrọ, ma ị bụ onye na-ekiri ekiri ma ọ bụ a oge mbụ fanatic a igwe kwụ otu ebe bụ na nke ahụ bụ ya tour de francethe nnukwu show isi ihe omume n'ụzọ nkịtị nnukwu ihe omume nke afọ na ịgba ígwè ụwa njegharị bụ oké mmalite ma ọ bụrụ na ị hụtụbeghị agbụrụ agbụrụ tupu ma ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye anyị ume ma ọ bụrụ na ị maara onye na-abanye ugbu a na ịgba ịnyịnya ígwè ma nwee ike ịchọ ịmata agbụrụ agbụrụ na njegharị. Zitere ha edemede a ka ha wee nwee ọ excitedụ, ekele maka ikiri na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ
Kedu igwe ndị ọgba ịnyịnya Tour de France na-eji?
Njem nke France2021anyịnya igwe
Bikes: BMC Igwe igwe SLR / Timemachine Road / Timemachine (TT)
Nchịkọta: Campagnolo Super Record EPS.
Wheels: Campagnolo Bora WTO / WTO Ultra, Pirelli P Zero taya.
Ngwudata ihe ngwụcha: BMC, Power2Max, Fizik, Elite, Wahoo.
Ọnwa Isii 26. 2021 g.
nwere ike iburu co2 katrij na ụgbọelu
Kedu igwe kacha dị oke ọnụ n'ụwa?
1. 24K Gold Oke UgwuIgwe kwụ otu ebe- $ 1 nde. Ezubere ma malite Hugh Power, nke a bụmostgba igwe kachasị ọnụn'ahịa na-efu otu nde dollar!
Gba ígwè na-abụkarị ụzọ dị ọnụ ala nke njem ọhaneze nwere ike imeli. Ma yensusuw nhwɛso bi a esii no ho nhwɛ. E nwere ịnyịnya ígwè ndị dị oké ọnụ karịa ụgbọ ala, ọ bụ ezie na a na-agụ ha.
N’isiokwu a anyị na-ekwu maka elu igwe igwe 10 kachasị ọnụ n’ụwa n’afọ 2021 1. 24k Gold Oke ugwu igwe kwụ otu ebe 1 nde abịa mbụ bụ 24k Gold Extreme igwe kwụ otu ebe nke Hugh Power mebere ma bido. bụ igwe kachasị ọnụ na ụwa na ahịa na ọnụahịa nke otu nde dollar, makwaara dị ka Beverly Hills Edition ma ọ bụ Fat Bike na 24k ọla edo dị ọcha. teknuzu atụmatụ wuru n'ime ahụ na akụkụ ọ bụla nke igwe kwụ otu ebe na galvanized na gbaara onye emblem diamond decorations chocolate aja aja agu iyi akpụkpọ ụkwụ bụ ụfọdụ n'ime nkà atụmatụ na-agbakwunye na mmezu nke imewe. 2. trek urukurubụba madden 500,000 ebe bụ crazy trekking urukurubụba nke na-efu gburugburu 500,000.
Cheedị igwe kwụ otu ebe na-enye gị nku n'ụzọ nkịtị, naanị ihe ị nwetara bụ na igwe kwụ otu ebe a bụ mpempe akwụkwọ nka na ụkpụrụ pink na odo odo nke Damien Hurst zụtara na ọnụahịa ahụ, n'agbanyeghị na ọ dị mma na ụfọdụ ikike anụmanụ Ndi oru a kpọrọ ya obi ọjọọ n'ihi na igwe kwụ otu ebe jiri ezigbo nku nku si urukurubụba, urukurubụba a bụ onye nzuzu na erere igwe kwụ otu ebe kachasị ọnụ ahịa na uru etolitere bụ iji nweta ego maka Lance Armstrong Foundation, mmemme enyemaka kansa. 3. 24k Goldmans na-agba ịnyịnya ígwè 393,000.
Would ga-eche na nke ahụ bụ igwe kwụ otu ebe na-abụkarị ọla edo. ịnyịnya ígwè kachasị ọnụ ebe a bụ igwe kwụ otu ebe bụ igwe eji agba ọsọ na nke edo edo sitere na Rolls-Royce will ga-eju gị anya igwe kwụ otu ebe a, n'ihi na ihe niile sitere na njikwa ruo na wiil ruo n'oche na-ekpuchi 24 carat gold ahụ nke igwe kwụ otu ebe. nwere a breathtaking anya na etiti enwu chawapụrụ karịa anyanwụ, na-eche ibu ala ọma ekele na magburu onwe ya akpụkpọ anụ oche na-na-mma na diamonds na ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa na nkume 4. Trekoshimoto Nara ọsọ echiche 200,000.
Anọ na ndepụta bụ Trek Yoshimoto Nara, nke na-efu ihe ruru 200,000. Ọdịdị ya dị ka ihe na-atọ ọchị ma bụrụ ihe atụ ya na-acha anụnụ anụnụ na odo odo na ọmarịcha ihe osise. A na-ere igwe kwụ otu ebe n'otu okushon dị ka ere otu urukurubụba, nke ndị lanze armstrong na-agba na mbụ na ụfọdụ ihe ndị bụ isi ịgba ọsọ eriri carbon. A na-erekwa ya iji nyere ntọala nke 5 aka.
Mee njem 160,000. adịghị nso n'azụ ihe kpatara njem njem ya bụ nke ebidoro n'ihe metụtara ndụ bụ ntọala siri ike na-alụso ọrịa kansa ọgụ na-akpata igwe kwụ otu ebe nke trek madden bụ na Ihe anyị na-akpọ ngwakọta zuru oke nke ịke, nkasi obi na ịdị mma nke Lance Armstrong ahụ mere ma kwado ya, onye a maara nke ọma n’etiti ndị na-agba ịnyịnya ígwè imewe ahụ nwere ezigbo nguzozi na oche ergonomic na njikwa anaghị esikwa ike ịchịkwa na igwe kwụ otu ebe dị oke ọkụ ma yabụ na-agbanwe agbanwe 6. Aurumania kristal mbipụta ọla edo igwe 114 000 ị nwere ike iche na igwe kwụ otu ebe nke ahụ bụ ọtụtụ ọla-edo bụ nke kachasị ọnụ igwe ebe a iji zụta Aurumania kristal mbipụta ọla edo na-efu 114 000 nke dị nwayọ nwayọ karịa nru ububa urukurubụba mana nke ahụ bụ ọnụ ahịa dị elu karịa site na ọrụ ebere, nke mbụ a na-ebute igwe kwụ otu ebe na 2008 site na ụlọ ọrụ Scandinavia Mania weputara ya ejiri aka wuru ya ma jiri gold carat 24 mechie ya.
Ọ bụ igwe kachasị ọnụ n'oge a na-eji ihe ngosi 600 mara mma chọọ Aurumania mma na Swarovski. igwe kwụ otu ebe N'anya hụrụ n'anya n'anya igwe na njem, egwuregwu bike anya ọkachamara na a ọnụ ọgụgụ nke ibu jụụ atụmatụ na-emesi ndị njem nke ndụ gị na otu auction dị ka ndị ọzọ egwu. Ọzọ, Trek Madden 7 diamond a rere maka onye buru ibu 7,5,000.
Igwe kwụ otu ebe a bụ ọla edo 14 na-acha ọcha na ọcha na 7 1 carat diamonds na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime igwe igwe ọnụ kachasị ọnụ n'ụwa. N'ezie, ola diamond ya agbakwunyere na nkwupụta nke ahụ igwe kwụ otu ebe, enwekwara ọla edo na-acha ọcha na edo edo n'ihu igbe ahụ na-agbakwunye glitz na nchapụta nke ụgbọ ahụ. 8. chrome heart ex Cervelo $ 60,000 na ebe nke isii ị ga-ahụ chrome obi x Cervelo igwe kwụ otu ebe, nke na-efu ihe dị ka 60,000.
The mgbe mbipụta ga-gburugburu 10 ugboro dị ọnụ ala karịa a igwe kwụ otu ebe e wetara site casaba chrome na mmekota na cervelo ọ bụ ọnụ n'ihi na artwork ọlaọcha cross akpụkpọ anụ oche na motif plọg 9. montante luxus gold collection 46,000 na nke ahụ bụ 46,000. The akụkụ nke a igwe kwụ otu ebe nwere ike kere ụzọ anọ bụ isi na gold akwukwo osisi Swarovski nkume nakwa eke na ha na-eji a 24 carat gold akwukwo na-ekpuchi eku na ndị ọzọ na mmiri na-eji elu mma osisi maka n'ihu na azụ Fenders na bụ tinyekwara elm 000 Swarovski nkume, nke eji gburugburu igwe kwụ otu ebe.
Ebe ọ bụ na ihe eke na-ejikarị akpụkpọ anụ bọọlụ eke Brazil kpuchie akụkụ dị iche iche gụnyere sadulu na njikwa, ọ bụghị ihe ijuanya na ọ dị oke ọnụ ma ọ dị na ndepụta otu ịnyịnya igwe kachasị ọnụ n'ụwa 10. igwe eletrik elektrik 44,000. N'ebe nke iri ị ga-ahụ igwe eletriki igwe kachasị ọnụ na ndepụta a ma ọ bụghị igwe eletrik eletrik na-efu otu puku ma ọ bụ puku puku na ọtụtụ elektrik eletrik Erika na-efu 44,000 nke dị elu karịa. Igwe ndị a nọ ebe a bụ otu ụdị ma ọ bụ mmachi ha dịkwa mma ile anya.
Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike imeli ya. Ndepụta a nke igwe igwe kachasị ọnụ nwere ike ịgbanwe n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ha kpebie ịmịbawanye igwe kwụ otu ebe karịa ma ọ bụ mepụta igwe kwụ otu ebe n'ọdịnihu echefukwala imelitere anyị ozi ọma ma ọ bụrụ na ịkekọrịta
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-akụda onwe ha?
Taa, ndị egwuregwu a ma ama ga-eme naanịkpochaa uwe ogologo ọkpa hagaa n'ihu. Buru n’uche ihe na-eme mgbendị na-agba ígwèamanye kakpochaa uwe ogologo ọkpa ha. Ndị ọkachamara na-asọ mpi ruo n'ókè na ahụ ha karịrị nrụgide - ọ na-adị ka ọ na-anwụ anwụ.Jul 21 2015
Ndị ọkachamara na-ebi n’elu igwe kwụ otu ebe ma na-etinye ọtụtụ awa na ọtụtụ awa n’ime sadulu. Echere m na ha na-eme ihe dị egwu, m na-echekwa n'ezie. - N’ezie.
protein ịma jijiji tupu ị lakpuo ụra
N’isiokwu a anyị ga-akọwa nke a, - (gasps) st na-esi isi! - Ma obuna - (rie ude) Enwere m obi iru ala - Oh Chineke m - Iju. (Warning siren) - rafọdụ agbụrụ dị ezigbo ogologo - San Remo, dịka ọmụmaatụ, ihe karịrị awa asaa, na mgbe ụfọdụ naanị ị ga-achọ pee! Ma eleghị anya, ị nwere obi ụtọ ma a ga-enwe lull ma ị nwere ike ịkwụsị ma belata onwe gị. Ma ọtụtụ oge ị ga-achọpụta na ọsọ ahụ na-agba ọsọ n’eziokwu ma ịkwesịrị ịkwaga.
uru nke ịgba ịnyịnya ígwè
Cheregodi naanị otu nkeji. Agbanyeghị, echegbula onwe gị ịhapụ ịhapụ otu a. Ọ dị mma enyi enwere m gị - Ọfọn, anyị nwere ike ịgaghị akwado ime nke a na ịgba ịnyịnya ọgbakọ gị, mana na agbụrụ ọ nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti mmeri ma ọ bụ ịla n'iyi.
Oh, achọrọ m nke ahụ! Ugbu a otu ihe pro ga-adị ezigbo mma na, na-agbanwe agbanwe oyi akwa nke uwe ha iji dabara ọnọdụ ha na-enwe. Anyị niile maara na ha mara ezigbo mma n'iwepụ ma wepụ akwa mmiri ozuzo! Ma ọ bụrụ na ị attentiona ntị, ị ga-ahụ obere ahụ achọpụtara yana hoo haa na-akpali akpali ala-n'ebe ọdịda anyanwụ anya - ị nwere ike hụrụ Sagan ka ya bike ya n'etiti a agbụrụ na-eche otú o si eme ya mgbe ịchịkwa igwe kwụ otu ebe na-ejigide nkà ndị dị elu. , karịsịa imezi aka gị, mana ndị ọkachamara na-agbanwe igwe kwụ otu ebe ha oge niile. Ọnọdụ kachasị dịkarịsịrị bụ ịhazigharị breeki gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwere igwe kwụ otu ebe nwere akara brek.
Ihe kachasị njọ maka ọkachamara bụ na breeki gị na-ete n'ahụ rim ahụ. Yabụ iji dozie ndị na-emegharị gbọmgbọm ahụ, ọ bụ nka onye ọkachamara ga-enwerịrị ruo T. N'ezie, mgbanwe mgbanaka rim, mgbe emechara n'akụkụ ụgbọ ala otu, yiri ka ọ nwere akara igwe kachasị dịkarịsịrị nke onye na-agba ịnyịnya - nke ịrụzi ihe, ngị karama m na-abịa atọpụ.
H have nwere ngwa ọrụ maka m? Ewoo! Ọma! - ulldọpụ ikpere m - ma ọ bụ ndị na-ekpo ọkụ ụkwụ na godos dị ka ezigbo ike siri ike ịmụta, mana iji usoro ziri ezi ọ ga-eme. Nke ahụ pụtara na ọgaranya na-eme ka ọ dị nro dị mfe ma yie ihe na-adịghị mma. Na m na-ekwu, ọ na-esiri gị ike ịkwanye ụkwụ karịa Knee warmers mana ọ bụ otu a ka esi eme ya - (Dan) Nzọụkwụ 1: Weta ikpere ikpere gị ruo na nkwonkwo ụkwụ gị Nzọụkwụ 2: Bugharịa ndị na-ekpo ọkụ gị n'akụkụ nkwonkwo ụkwụ gị nso n'akụkụ ụkwụ gị.
Kwụpụ 3: Kwụpụ akpụkpọ ụkwụ gị ma kpuchie ihu gị, wee mechaa. Nzọụkwụ 4: Kpagide ma tinye ikpere gị na-aba n'akpa gị ma ọ dị na nke na - esote - namịpụ nri ma drinkụọ n'akụkụ ụzọ bụ nka ọzọ dị ezigbo mkpa maka ọkachamara ma nwee ike bụrụ ihe dị oke mkpa dị ka ọ dị na ọkara nke abụọ agbụrụ igwe kwụ otu ebe. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agbụrụ niile nwere mpaghara nri ka ihe dị ka kilomita 90 gachara, ebe ọ bụ na onye na-agba ya ga-eri obere karama mbụ na akụkụ nke nri ha.
Ezubere ebe a na-enye nri bụ ebe ndị okenye na-adọba ụgbọala ha ma kesaa karama ndị ahụ. Mgbe onye ọkwọ ụgbọala chọrọ ijide karama ahụ, gosi ndị otu ha chọrọ ịpụ, kwụsị na mbata ahụ, rute aka, chọta onye ọdịmma ahụ nke yi uwe yiri ya, wee jide karama ahụ; musettes na-adịkarị mfe ijide dị ka ebe a na-etinye nri ebe a na-agba ọsọ obere ọsọ - ịgbatị: nke ahụ dị mfe ugbu a, mana mgbe ị na-agba ịnyịnya ị na-eme enweghị m okomoko nke ime yoga poses do . Yabụ nke ahụ bụ etu ị si agbatị na igwe kwụ otu ebe - (Chris) Yabụ kedu ka ha si eme ya? Ọfọn, ihe kachasị gbasaa bụ maka quads gị.
Wepu akpụkpọ ụkwụ gị ma gbanye ụkwụ gị mgbe ị dokwasịrị ụkwụ gị na sadulu gị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị miri emi wee laghachi n'ụkwụ gị - ebe ị nwere ya, uru ndị ahụ na-eme ụfọdụ ihe dị egwu - mana ọ bụrụ na ị bụghị onye na-agba ịnyịnya ígwè, ị nwere ike ghara ịnwale nke ọ bụla n'ime ndị a - Mba, nke ahụ bụ eziokwu. Ma ọ bụrụ na ị masịrị edemede a, nye ya nnukwu mkpịsị aka - Ma maka isiokwu ọzọ, lelee nke a, jụọ uru.
Kedu ihe ka mma Schwinn ma ọ bụ Mongoose?
Bike Quality & anwụ ngwa ngwa
Ke ofụri ofụri, maMongoosenaSchwinnigwe kwụ otu ebe na-eji osisi aluminom,nke bụọnụ ọnụ, a pụrụ ịdabere na ya, na fechaa. Onye mmeri:Mongoosen'ihi na ha na mara maka elu-edu aluminum okpokolo agba nke, mgbe ubé oké ọnụ karịaSchwinnokpokolo agba, na-abụ ihe inogide.
Na-eme egwuregwu pọọ na igwe kwụ otu ebe?
Urin. Mmalite nke ịgba ọsọ na-akpachi ọtụtụihe egwuregwu. N’echeghị obere gbasara ndị agbụrụ na-eso ha, ụfọdụihe egwuregwuga-enyere onwe ha aka mgbe ha na-agba ịnyịnya naigwe kwụ otu ebe, wee soro nnabata jiri karama mmiri sachaa.
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji ewe oke iwe?
A ọgba aghara iwe nwere ike ịmalite n'ihi na aonye na-agba ígwè, ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụ onye na-agafe agafe kwenyere na onye ọzọ na-eji ụzọ eme ihe adịghị mma, na-emebi iwu okporo ụzọ, ma ọ bụ n'ọtụtụ ọnọdụ n'ihi na mmadụ chere na omume nke onye ọzọ na-eji ụzọ eme ihe na-emebi nchekwa ha.
Gịnị mere anyịnya igwe Walmart ji dị njọ?
Walmart anyịnya igweanaghị adịru ogologo-Walmart anyịnya igwebụ ụdị nke disposable. Ha enweghị ogologo ndụigwe kwụ otu ebeụlọ ahịaanyịnya igwe. N'ezie, ịnwere ike ịnweta naanị 100-200 kilomita ma ọ bụ oge 15-20 nke iji yaigwe kwụ otu ebetupu ọ malite inye gị nsogbu. Okpokolo agba dị nchara ma ọ bụ ike ọgwụgwụ.Ọnwa Ise 30, 2021
nye onyinye ịnyịnya ígwè na ọrụ ebere
Mongoose ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe na njedebe ya,Mongooseawade nke ukwuuezigbo igwe. Onye na-azụ ihe kwesịrị ịma ókèala ndị ahụ, ma maka ebumnuche nke ha, họrọ nke kwesịrị ekwesịMongooseịnyịnya ígwè ma ọ bụ maka ịkwagharị ma ọ bụ ịgba ígwè siri ike.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-asụ nsị mgbe ha na-agba ịnyịnya?
Fọdụ ndị na-agba ịnyịnya na-akwụsị n'akụkụ ụzọ ịga maka apee. Peloton nwere ike ịhazi onwe ya, na-ahọpụta oghere 'nature break'n'ogenke ndị na-agba ịnyịnya ga-achịkọtapee; na ọdịnala Grand Tour kwuru na onye ndu GC na-ekpebimgbe olenke a gabu.
Kedu ụdị igwe mmega ahụ Tour de France na-eji?
Dị ka ihe a ma ama kachasị mma na ngwa ngwa n'ụwa, anyị emezuola sayensị nke ịgba ígwè ruo afọ iri atọ. Mgbe anyị na Le Tour de France na-emekọrịta ihe, anyị weere ihe ịma aka nke ịmepụta usoro ime ụlọ dị ike nke enyere iji nye ọzụzụ ọkachamara na teknụzụ ọhụụ - TDF Pro 4.0.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji zụọ maka Tour de France?
Ben Day, Mitchelton-Scott Cycling Team bụ onye nchịkwa na-arụ ọrụ dị elu kwuru, sị: 'December bụ n'ozuzu ọnwa buru ibu na-ewu nnukwu olu, dị ka Jenụwarị,' “Weekbọchị izu ọrụ ga-abụ ihe dị ka awa iri abụọ ruo awa iri atọ na otu. Ya mere, ha na-etinye oge dị ukwuu n'ebe ahụ na igwe kwụ otu ebe, mana anyị na-agbasi ike.
Kedu otu onye na-agba ịnyịnya ígwè si akwadebe maka Tour de France?
Ndị nkuzi, ndị ọkachamara, na ndị ọrụ otu na -ekere otu ndị na-agba ịnyịnya si akwadebe maka otu n'ime ahụ ike na-agwụ ike n'ụwa. The Tour de France bụ okpueze nke kalenda WorldTour. N'ime izu atọ, anya niile dị na ndị ọkachamara ịgba ịnyịnya ígwè kachasị mma ka ha na-akwagharị ahụ ha na njedebe nke ihe karịrị kilomita 2,000.